Raharaha angidimby Mahamasina: Manameloka ny ministeran'ny Serasera ireo Mpanao gazety nampangaina
samedi, 21 septembre 2019 14:13
Namory mpanao gazety teny amin'ny Karibotel Analakely ireo mpanao gazety voampanga ho namoaka vaovao tsy marina mahakasika ilay angidimby an’ny Tafika Malagasy nidina tao amin’ny Kianja monisipaly Mahamasina ny 30 Aogositra 2019 teo.
Nambaran'izy ireo tamin'izany fa tsy mety ny fomba nitsarana azy ireo, ary manameloka ny fanambarana nataon'ny ministera, nosoniavin’ny Tale jeneralin'ny serasera, izay « faly » amin’ny didim-pitsarana nivoaka tamin’ny alakamisy 19 septambra 2019, fihetsika izay tondroin’ireo mpanao gazety voampanga ho tsikombakomba fanasaziana mpanao gazety.
Efatra no vaorohirohy tamin’ity raharaha ity, taorian’ny fitoriana nataon’ny CEMGAM, ka mpanao gazety ny telo. Voaheloka handoa lamandy 10 tapitrisa Ariary ny mpanao gazety roa, nafahan’ny Fitsarana noho ny fisalasalana ny mpanao gazety iray, nafahan’ny fitsarana kosa ny Tale iray ao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.
Nampakatra ny raharaha any amin’ny fitsarana ambony ireo mpanao gazety, napetraka ny zoma 20 septambra 2019 ny fitoriana mikasika izany.